ငါးမွေးကန် DIY | ငါး၏
ဤဘဝရှိအရာအားလုံးကဲ့သို့ပင်ငါးပြတိုက်များကိုလည်းသူတို့၏ပိုင်ရှင်များမှပြုပြင်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည်ဆိုပါစို့ ငါးမွေးကန် diy အမြင့်ဆုံးနှင့်တစ်ခုချင်းစီကိုငါးမွေးမြူရေး၏ကျွန်ုပ်တို့၏စတိုင်ခံစားရန်ကပြုပြင်မွမ်းမံကျွန်တော်တို့ရဲ့အလိုဆန္ဒနှင့်စပ်လျဉ်း။
ဒီအာကာသအတွင်း အကြံဥာဏ်အမျိုးမျိုးကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ကိရိယာများ၊ ပစ္စည်းများနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ အကောင့်တစ်ခုအတွက် ၁၀၀% လုံခြုံစိတ်ချရသောငါးမွေးကန် DIY ကိုခံစားရန် (သို့) အနည်းဆုံးအများဆုံးကျွန်ုပ်တို့၏ခံစားခွင့်ကိုခံစားရန် ငါး၊ လိပ်၊ ကုန်းနေရေနေသတ္တဝါများသို့မဟုတ်ကျောရိုးမဲ့သတ္တဝါများ သင့်အိမ်ကိုအလွန်ပျော်ရွှင်ပါ။
ငါးတစ်ကောင်ချင်းစီသည် ၄ ​​င်း၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ငါးမွေးမြူရေးတစ်ခုချင်းစီ၏လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီစေရန်အသေးစိတ်အချက်အလက်များစွာကိုကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ကိုမမေ့ပါနှင့်။
por နာတာလီယာ ချယ်ရီ လွန်ခဲ့တဲ့ 10 လအတွင်း .
por Ildefonso Gomez လွန်ခဲ့တဲ့7အနှစ် .
por Viviana Saldarriaga လွန်ခဲ့တဲ့ 10 အနှစ် .
ကျွန်တော်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း, ငါးမွေးမြူရေးသမား၏စိတ်ဝိညာဉ်ကိုရှိသည်သောသူတို့၏အမျိုးအများ၏မဖြစ်မနေမေးခွန်းတွေထဲကတစ်ခု, ဘယ်လို ...
ကျွန်ုပ်တို့၏ Aquarium ၏အောက်ခြေအလှဆင်
ထုံးကျောက်ဖြင့် Aquarium အလှဆင်